ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှု၊ မြေယာ သိမ်းဆည်းခံရမှု နဲ့ အိုးအိမ်စွန့်ခွါ ပုန်းရှောင်ပြေးလွှား နေရတာတွေလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲပဲလို့ တိုင်းရင်းသားတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဦးဉာဏ်ဝင်းအောင် ရဲ့စုစည်းတင်ပြချက်မှာ နားဆင်ပါ။
ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ မတရားမှု လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တင်ပြ
RFA,please submit my comment.Mant times, I have send to RFA,but,not mentioned about our land taking away by this military Junta Government. I have send to you over 20 times about this plot of land from Dawei.Please mention our true story,that suffered to our feeling of lost.
Sep 08, 2011 01:28 PM